Ma Ogtahey Duulaanka Ka Dhanka Ah Mayorka Saylac iyo Sababta?Guulihiisii Waxqabad+Gaabiskiisii+Xalka iyo Hal Aan Xildhibaanada Idhi BY:Dr.khadar-Libaaxley | Lughaya.Com
Ma Ogtahey Duulaanka Ka Dhanka Ah Mayorka Saylac iyo Sababta?Guulihiisii Waxqabad+Gaabiskiisii+Xalka iyo Hal Aan Xildhibaanada Idhi BY:Dr.khadar-Libaaxley
Ma dumaalo naagaha ninkey nolol ku dayrshaan.
Nin walaalkii dooraday ilaah darajo siinwaaye.
Baadida ninbaa kula daydaya daalna kaa badane
Oo aan dooneyn in aad heshana daa’in abidkiise
Dadkuna moodi duul wada dhashoo wax u dahsooneyn.
Dilaal iyo malaal wuxuba waa cadowga daynkii
Alle idilye magafe idinkaa iiga sii daran.
Qamaan bulxan tuduc ka mid ah tuducyadii silsiladii guba.
Qormadani waxay ay koobsandoontaa:
1. saylac iyo waayo xasuustood.
2. Guulihii iyo Waxqabad ka mayorka saylac qayb ka mid ah.
3. Sababta loo dagaalka loogu wado mayorka saylac.
4. Dhaliisha uu leeyahey mayorku.
5. Talo u soo jeedintayda mayorka.
6. Duur xulkayga ku jihaysan xildhibaanada iyo guubaabo.
Degmada saylac guyaal iyo guyaal badan oo tagay ayaa gibil madow iyo yuhuun caydh ah ku dednaa ayaankeeda ay kula loolami la heyd asaageed, saylac dharaaro xasuustood iyo baryaha qaar bay dhoolaha ka farax qosli jirtay marka la yidhaa ( geeska afrika saylacey magaalana waa kalidaa, ilbaxnimana waa kalidaa ) oo aheyd xidigta geeska afrika ka illaysata , xarun ay iska soo dhaxleed dawlada badan oo waayuhu kala badaleen; qof ahaan baan ku garaadsadey iyadoo ciyaalka iyo dumarku fiidkii ku heesaan ( naa saadooy saylac baa lagu geynayaa !! nin saraa lagu siinayaa ), hayeeshee quruxdii iyo qaayahey laheyd waxa dawgal u noqday afkaarihii isdiiday ( gumeesytaha iyo muwaadiniintii taaley sabankaasi ) ee ku kala aragtida ahaa yeen murtida muwaadiniintuna noqotay ( gumeystow naga joog , waxaad soo sidan celi ) gumestuhuna si hoose cadaawadii uu u guntaday dagaal qabow ku burburi oo ku rid xidigii ifaayey ee saylac.
Saylac baryo wuxuu ku dednaado saxal gibil madow iyo nuxuusta nujub waayo duruufeedyo qalafsani 2012 doorashadii golaha deegaanka waxa gudoomiye degmo loogu doortay ( mudane xuseen iidle barkhadle mayorkii ugu horeeyey ee dorasho codeyn ah ku soo baxa abid ).
Mayorku degmadii saylac waxa uu ka dhigay degmada ugu dakhliga badan degmooyinkii 4ta ahaa la isku odhan jiray awdal, saylac waxa ah kastamka 3aad ee dalka ugu soo dakhli xareyn badan.
Mayorku degmadii saylac waxa uu ka dhigay saylacday waayo waayo ahaan jirtay, waxa uu qabtay waxqabad isaga hortii aaney cidi qaban oo ay ka mid tahey :-
1. biyo macaan in degmada la soo galiyo tiiyoo ingiriis iyo turkiba aaney biyo soo galin .
2. dhismaha xarunta dawlada hoose oo casriya iyo waliba xafiisyo qalabeysan.
3. Dhismaha sariimada dumarka iyo sariimada hilibka oo casriya.
4. Dhismayaasha xarumo caafimaad dhamaan gobolka salal oo dhan
5. Dhismayaasha xarumo waxbarasho dhamaan gobolka salal oo dhan.
6. Dhismayaasha xarumo madarasado diimiya iyo masaajido dhamaan gobolka salal.
7. Yagleelida solar laydh magaalada saylac oo dhan ifiya habeenkii, iyo dhirayn in uu u sameeyo magaalada maadaama oo biyo macaan uu u soo saarey mayorku.
8. Waxa uu u iibiyey dawlada hoose gaadii badan oo isugu jira ( cagaf-cagaf weyn, iska rogooyin, booyado biyaha geeya meelaha durugsan iyo qalabkale oo fara badan ).
Intani waxa ay qeyb ka tahey kaliya inta aan ka xasuusto waxqabadkiisa waan hubaa in ay ka badantahey.
Maxaa loo eryanayaa mayorka?? yaase eryanaaya? Waa maxay xantiisa dhabta ah?
Guntimaha habeen ninkii xidhaa isagaa garta ,ridada warmaha cadawga ayaa dul-yuurara al-baabka xafiiska mayorka saylac kuwaasi oo u halgamaya daminta illayskii u soo daahiray degmada saylac iyo Salal , Waa cid biyaha hoostooda mareysa, oo ka xun oo ka seexan kariweyday guulaha horusocodka leh ee uu foolka soo dhigay intii uu mayor xuseen iidle xilka degmada iyo gobolkaba hayey. (saylacey waxba yaanu xeerkaa kumarin xoolana ku siine
xaashee nin libin kaa xisdiyey xumihii waa yaaba ), waa cid neceb horumarka saylac iyo in ay degmada wax u soo kordhaan,waa uur ku dhiigle buka oo ka xun jiritaanka dadka oo leh muxuu alle idiin jirsiiyey ?! waa nacab ay dhexmarayaan fariimaha sharka ee shaydaanku wado kuwaasi lidi ku ah horumarka degmada; Waligeed ba balo uu helaa ninka u dadaalaa, ciil iyo cadho u dhimo oo geerida ku sug diilalyo iyo ciil oo waligaa ha aflixin.
Mayorka xantiisa dhabta ah: waa gacan gundhaan, gacan gudhan, garweecsan iyo gudoon jilisan intaasi ba ama midkood waxa ay kaa ka xaysaa madaxnimada, ( moyar xuseen iidlana waxa lagu xantaa gacan gudhnaan weyn ) hayeeshee gacan gudhnaantiisaasi laguma hoogin waxa uu ka dhalaaliyey waxqabadka aynu kor ku soo xusnay ee baaxadaasi leh ee bulshadu amaan meesha uu soo maraba markhaatiga ay u furayso.
Mayorka waxaan leeyahey :-
Dhagxumo iyo ceebuu nin ragi ka dhawrtaa, waxa xildhibaanadu kugu soo eedeeyeen waa ( kali talisnimo iyo gudi hoosaadyadii oo aan dhisneyn ) hal garowshaley mayorow gobi la yeedhaaye garab-wagliil uu xunyahey la isgaraaxaayi, guulaha aad gaadhey iyo xilka aad haysaba iyaga ayaad wax ku tahey waayo nina guusha kama helo daleed madhan ee dadkaa geesi lagu yahey,hadii uu sidaa xaalku ku sii socdo waxa uu noqonayaa arinku ( guushii xerada weydaaratay ee dhaaftay gurigeeda, guushii habowday ee asqow geedi kale raacday gabagabada midhaheedu waa guuldariyo ciil ).
Xildhibaanada waxaan leeyahey :-
Guux iyo dareen baan arkaa soo gadaal baxaye Cadaw ii gabbanayaan arkaa gaadmo duurxula’e Gadhwad iyo hoggaan baan arkaa goostay xadhiggii.
Nin duunyo kaa geysay waa geeri kula nool oo hadii caqligu iibsi gali waa garsoor dumay , xaqiiqduna waxay tahey waran meel xun laga riday dibuu kuu makalayaaye ha noqonina doqontii nin kale maamusho iimaankiisa.
Mudane mayor xildhibaanada dhuunta u qoo oo jalka la ogow waligaa, bulshadana u shaqee, gacan furana haku talax tagin, mid gudhana ha ku adkeysan, amuur oo dhan dhexdhexaad baa u buriyo dheeraad ah, xidhibaanadana waxaan leeyahey waar caqligiinu yaanu iibsi galin, maalmaha dambeetiyo wixii maqana faaleeya.